अनौठो बिश्व Archives - Page2of2- ejhajhalko.com
विशेष चस्मा लगाउँदा पनि नरेन्द्र मोदीले सूर्य ग्रहण देख्न नपाए पछि गरे यस्तो टुईट्
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बादलका कारण सूर्य ग्रहण हेर्न नपाएको उल्लेख गरेका छन् । विशेष चस्मा प्रयोग गरी सूर्य ग्रहण हेर्ने प्रयास गरेपनि बादलको कारण आफ्नो प्रयास सफल हुन नसकेको मोदीको भनाइ छ । बिहीबार लागेको सूर्य ग्रहण अवलोकनका लागि नयाँ दिल्लीस्थित आफ्नो सरकारी आवासको बगैंचामा पु...
आज डिसेम्बर २२ तारिख : वर्षकै सबैभन्दा छोटो दिन !
आज डिसेम्बर महिनाको २२ तारिख, अर्थात् वर्षकै छोटो दिन। आज थोरै समयमात्र घाम लाग्ने भएकाले दिन छोटो र रात लामो हुने गर्छ। भोलि देखि अलिअलि गर्दै दिन लामो र रात छोटा हुँदै जाने भए पनि यसको महसुस हुन भने केही समय लाग्ने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँछन्। सबै ग्रहले आ–आफ्नै समयअनुसारले सौर्य मण्डलको परिक्रमा गरिरहेका हुन्छ...
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने ,नाङ्गो आँखाले नहेर्न आग्रह
आगामी साता खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएको छ। पुस १० गते बिहीबार बिहान ८ बजेर ४३ मिनेटमा शुरू हुने ग्रहण दुई घन्टा ४९ मिनेटको रहनेछ। ग्रहण अवधिभर सूर्यलाई चन्द्रमाले ढाक्ने भएकाले सूर्य कालो र वरिपरीको भाग मात्रै उज्यालो ‘रिङ अफ फायर’का रूपमा देखिने खगोविद्को भनाई छ। काठमाडौैंबाट करिब ४८ प्रतिशत सूर्यको भाग ...
सिन्धुपाल्चोक केन्द्र भएर ४.८ म्याग्निच्यूडको भुकम्पको धक्का
काठमाडौंमा बिहीबार साँझ ७ बजेर ११ मिनेटमा भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको सरमाथान आसपास केन्द्र भएर साँझ ७ बजेर ११ मिनेट जाँदा ४.८ म्याग्निच्यूडको परकम्प गएको हो । यो २०७२ साल वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पको परकम्प भएको केन्द्रले जनाएको छ । यसअघि यही मंसि...
पश्चिमी वायुका कारण बुधबारदेखि भारी हिमपात सहित पानी पर्ने
पूर्वी इरान र अफगानस्तानमा बनेको पश्चिमी वायुको प्रणाली नेपालतिर सरिरहेका कारण भोली (बुधबार) बेलुकीदेखि हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात हुने भएको छ। यो वायुले पहाडी क्षेत्रमा पनि बर्षा गराउने मौसमविदहरुले जानकारी दिएका छन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि बुधबार बेलुकीदेखि हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने पूर्वान...
काठमाडौमा भुकम्प को धक्का महसुस
काठमाडौ । राजधानी मा भर्खरै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । आज बुधबार बेलुका १० बजेर १० मिनेटमा ठूलै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । अन्य विवरण आउन बाँकी छ ।...
अल्बानियामा ६ दशमलब ४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प
अल्बानियामा मंगलबार शक्तिशाली भूकम्प जाँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । १ सय ५० जना घाइते छन् । भूकम्पबाट यहाँ थुप्रै भवन र भौतिक संरचना भत्किएका छन् । राजधानी तिरानाबाट ३४ किलोमिटर उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर ६ दशमलब ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो । प्रधानमन्त्री एडी रामाले पनि भूकम्प...
पश्चिमी वायुको प्रभावले मुलुकभर चिसो बढेको छ। अरेबियन सागर र भारतको जम्मुकास्मिर हुँदै भित्रिएको जलवाष्पयुक्त वायुको प्रभावले उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात शुरू भएको छ। सोमबार पूर्वी पहाडी र हिमाली भेगमा हल्का हिमपात शुरू भएको र आज मंगलबारदेखि मध्यभेग, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च भेगमा पनि त्यस्तो प्रभाव रहन...
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरूले कुनै मानिस बायाँ हाते हुनुमा डीएनएमा हुने आनुवंशिक संरचनाको भूमिका भएको प्रमाण पहिलो चोटि फेला पारेका छन्। मस्तिष्कको संरचना एवम् त्यसको काम गर्ने प्रणाली त्यसमा पनि विशेषतः भाषिक सीपमा त्यो आनुवंशिक निर्देशक प्रणालीको प्रभावशाली संलग्नता देखिन्छ। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयक शोधकर्ताहर...
३ मंसिर, काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। बझाङको पौवागढी आसपास केन्द्रबिन्दु पारेर मंगलबार साँझ ७ः १५ बजे भूकम्प गएको हो। अछाम, बाजुरा, दैलेख, जाजरकोट, दार्चुला, कालिकोट, कैलालीसम्म भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। क्षेत्रिय भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख दीपक बस्नेतका...
बेलायतको हाउ अफ लर्डस्मा यस हप्ता १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई फेसबुक तथा ट्वीटर चलाउन रोक लगाउने विषय पनि बहसमा सामेल गरियो । बालबालिकालाई निश्चित उमेरपछि मात्र सोसल मिडियामा अनुमति दिने विषयलाई डाटा सुरक्षण अध्यादेशमा सामेल गर्ने विषय बहसमा आयो । यो कानूनबाट सानो उमेरका बालबालिकालाई सोसल मिडियाको माध्यमबाट हुने शोषणबाट...
रुसका एक युवकले हालै यस्तो दाबी गरेका छन् कि त्यसबाट वैज्ञानिकहरु पनि अचम्ममा परेका छन् । २० वर्षका बोरिस्का किप्रियानोभिचले आफू पहिले मंगल ग्रहमा बस्ने गरेको दाबी गरेका छन् । उनले अन्तरिक्षका ग्रहहरुको बारेमा यस्तो सटिक जानकारी प्रदान गरेका छन् कि त्यो वैज्ञानिकहरुका लागि पनि रहस्यको विषय बनेको छ । उनका अनुसार, ...
हवाइजहाजमा यात्रा गर्दा यात्रुका झोलाको तौल नाप्नु त स्वभाविकै हो । तर के कहिल्यै यात्रुकै शरीरको तौल नापेको सुन्नुभएको छ ? सायद दुनियाँमा यस्तो कतै पनि हुँदैन । तर युरोपमा भने एउटा वायुसेवा कम्पनीले विमानमा चढाउनुअघि यात्रुको तौल नाप्न थालेपछि चर्चा कमाएको छ । फिनल्याण्डको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक फिनएयर नामक विमान कम्प...